Fifidianana sy fividianana… anana! | NewsMada
Fifidianana sy fividianana… anana!
Kandidà Ranona, kandidà Anona. Mananika ny 40 izy ireo ny nanatitra ny antontan-taratasy filantsahan-kofidina eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana. « Aleo ho maro ahafahana mifidy », hoy ny sasany. « Misy azy indray ny fividianana ny safidim-bahoaka », hoy ny hafa. Samy hevitra re etsy sy eroa avokoa ireo. Ny isa kosa, manambara fa « maniry toy ny anana » ny mpifaninana. Tarehimarika manambara endrika iray maneho fa tany an-dalam-pandrosoana i Madagasikara, raha ny fanazavan-dry zareo ampahana manampahaizana manokana momba ny politika. Ny mpahay tsikera politika sy toekarena indray, milaza fa ny fahamaroan’ny kandidà tahaka izao no ahafantarana fa « tany lalaovim-bahiny ilay firenena »… Fanehoan-kevitra vitsivitsy momba ny isan’ireo kandidà hifaninana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ireo.
Mila mifidy ny Malagasy. Tsy tokony ho voavidy anefa ny safidy. Raha mby ao an-tsain’izay manan-jo hifidy io raikipohy io, efa zava-dehibe ny fiantraikan’izany eo amin’ny voka-pifidianana. Amin’izay fotoana izay, tsy misy afa-miala satria samy tompon’andraikitra nahavoafidy ilay kandidà. Ampahany ihany anefa ny vitan’io raikipohy io fa tsy azo hamaivanina ny fahaiza-misafidy. Famakafakana ny momba ny kandidà tsirairay indray no tokony hataon’ny mpifidy. Fady ny manao rapadango na sodokan’ny mamy eo imolotra. Raha sanatria, diso safidy, diso fanantenana. Vokatry ny fividianana izay fa tsy vokatry ny fifidianana ka hiteraka nenina.
… Na maniry toy ny anana (fomba fiteny ilazana fitobahana sy fahamaroana) aza ny kandidà, tsy ho sarotra ny manavaka ny vary amin’ny tsiparifary raha mamakafaka sy mandinika tsara, mialoha ny hiatrehana ny fifidianana ireo rehetra manan-jo hifidy. Sa sanatriavina ho tsy lasa lavitra loatra intsony ve ny fahaizan’ny Malagasy mandinika noho ny antony samihafa ? Raha izay tokoa ny marina, ho valim-pividianana no hisy eto fa tsy valim-pifidianana !